Dowladda Kenya oo si rasmi ah u sheegtey imaanshaha Madaxweyne Farmaajo ee Nairobi - Awdinle Online
Dowladda Kenya oo si rasmi ah u sheegtey imaanshaha Madaxweyne Farmaajo ee Nairobi
March 13, 2020 (Awdinle Online) – Madaxweynaha Dowladda federalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa la rajeynayaa in uu safar la qorsheeyey ku tago magaaladda Nairobi ee dalka Kenya.
Warbaahinta Awdinle Online ayaa Heshey warqad afrti ah oo kasoo baxdey Wasaaradda arimaha dibadda ee Kenya, taasi cadeyn u ah safarka Madaxweyne Farmaajo.
Safarkan uu Madaxweynaha Dowladda federalka ah ku tegi doono kenya, ayaa ka dhashey ka dib markii uu maalmo ka hor magaaladda muqdisho booqasho ku yimid Wasiirka Amniga gudaha ee Dowladda Kenya Dr Fred Matiang, iyadoo laga wada hadley xiisadda nabadgeliyada darada xambaarsan ee ka jirta xuduuda labada dalka.
Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa safarkan Madaxweyne Farmaajo uu Kenya u aadi doono u arka mid bahdilaad ah, mana ahanba baa la yiri mid xal waara dhalin kara.
Dhanka kale, waxaa magaaladda Nairobi kusii jeeda Madaxweynaha jubbaland Axmed Maxamed Islaam, ujeedada ugu weyn ee safarka Axmed Madoobe ayaa lagu sheegey in ay tahay heshiis la dhex dhigi doono Axmed madoobe, Seeraar iyo xidig.
Halkan ka Akhriso Warqadda
Previous articleKiiskii ugu Horeeyey ee Corona Virus oo laga helay Kenya
Next articleFocus Friday: Do you know how the World Bank Group is helping countries with COVID-19?